ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “အဖေတူသား”
ကိုပေါ post တွေ မရီရတာ ကြာပြီ။
ဒီ post တော့ တော်တော်လေး ရီလိုက်ရတယ်။
I think Leonardo Dicarprio hasn't got Academy yet.
ထောက်ပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေမှန်ပါတယ်။ ကျနော့်အမှားပါ။ အဲဒီကားမှာ အကယ်ဒမီငါးဆု ရတာမှန်ပေမယ့်.... လီယိုနာဒိုက အကောင်းဆုံးအမျိုးသားသရုပ်ဆောင် နေရာအတွက် Nominated တစ်ပေးခံရသူမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အော်စကာ မရခဲ့ပါဘူး။ ပို့စ်ထဲမှာ ပြင်လိုက်ပါမယ်။
ကိုပေါရဲ့ ဟာသကိုပြန်တွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့လဲ နားစလေးနေပြီထင်တယ် အော်ပြောမှ ကြားရလို့ ကလေးတွေတောင်အကျင့်ပါနေပြီ။
ပို့စ်လေးကတော့ရီရပါတယ် ... ဒါပေမဲ့ နားမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ စိတ်တောင်မကောင်းဘူး ... ကျွန်မညီမလေး မဒမ်ပေါ ကျယ်ကျယ်ပြောနေရတာပေါ့။ မတွေ့တာကြာပြီ ။ ကြာဆို ၁၀နှစ်လောက်ရှိရောပေါ့။
Your age is only 38yrs!
It is too young for hearing loss.
My age already passed 53yrs.
But still OK for sight and hearing.
You have to keep at least2metre away from shouting peoples.
Please remember the ISO 1999:1990 clause 3.6
The following figures giveaguide to the acceptable maximum daily noise
does for unprotected ears.
less than 80dB no limit for 24 hrs.
82dB for 16 hrs.
85dB for 8 hrs.
90dB for2hrs.
95dB for 50 mins
100dB for 15 mins.
105dB for5mins.
110dB for 1 min.
Your Office, conference room may be 65dB, your house may be 60db.
But I don't know how much decibel of Madam Pal's crying out.
အော် ကိုပေါ ခုလို ရီစရာလေးတွေ မရေးတာကြာပေါ့
I thought you are 45-50 :) :D
But very happy to know that you are only 38 (sure or not :D). You are still very young.
But very sad to know that you have hearing problem.
Hope you could post many joke.
ကိုပေါရေ အဲဒါဆိုရင် ဆားပုလင်း နှင်းမောင်လို နှုတ်ခမ်းလှုပ်တာနဲ့ ဘာပြောတယ်ဆိုတာ သိရအောင် ကျင့်ထားသင့်တယ်။
ကိုပေါ… တယ်လီဖုန်းပြောရင်တို့ကွန်ပြူတာနဲ့ သီချင်းနားထောင်ရင်တို့တယ်လီဖုန်းနဲ့ သီချင်းနားထောင်ရင်တို့နားကြပ်သုံးလေ့ရှိလား… အဲလို နားကြပ်သုံးလေ့ရှိရင်တော့ နားနဲနဲလေးသွားတတ်တယ်… အသက်နဲ့ မဆိုင်ဘူး… ကျွန်မကလဲ နားကြပ်သုံးလွန်းလို့အိမ်မှာ သားနဲ့ သူ့ အဖေ ကြားရတဲ့ TVအသံကို ကျွန်မက သိပ်မကြားရဘူး… ဒါပေမယ့်လဲ ခုထိ နားကြပ်သုံးဆဲပဲ… အသက်ရလာလို့ လေးတာနဲ့ နားကြပ်သုံးလို့ လေးတာနဲ့ ပေါင်းလိုက်ရင် ကျွန်မအသက်ကြီးလာရင် နားမှကြားရမလားပဲ… ကိုပေါရေ… ကျွန်မနဲ့ ပြောရင် အမြဲကြားရတယ်မိုလား…ဟဲဟဲ… နဂိုက အသံကျယ်တာ မဟုတ်ပါဘူး… ကိုပေါအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြောပေးတာ(ဟဲဟဲ)
တစ်ယောက်ယောက်ကို နားကြားကိရိယာ နှစ်ကူးလက်ဆောင် လိုချင်တယ် ဝယ်ပေးပါလို့များ သွယ်ဝိုက်ပြောလိုက်တာလား မသိဘူး။
မမန့်ဖြစ်တာ အတော်ကြာပြီ ... ခုပို့စ်က ကျွန်တော်နဲ့ သက်ဆိုင်နေလို့ (အမှန်က ရေးလည်း ရေးချင်လို့) ...
ကျွန်တော်ကတော့ ခုမှ နားလေးတာ မဟုတ်ဘူး။ အဲ .. နားလေးတယ်လို့လဲ ပြောမရဘူး။ အနီးစပ်ဆုံး ပြောရရင် အသံကြား မကွဲပြားတာလို့ ဆိုရမလားပဲ။
ငယ်ငယ်က အိမ်ပြောထပ်က လှမ်းပြောရင် ဘာပြောမှန်း မသိလို့ နား၊ နှာခေါင်း နဲ့ မျက်စိဆေးရုံ (ထင်၏) သွားပြတော့ နာ့စ်မရဲ့ အဆူအဟောက်ခံပြီး ပြန်လာရတယ်။
ကြားမှာပေါ့ ... နား နားလာပြီး သံချောင်းတီးနေတာကိုး ... :(
ထမင်းစားရင် စကားသိပ်မပြောဖြစ်ဘူး။ သူများ ပြန်ပြောရင် ဘာပြောမှန်း မသဲကွဲလို့။ ကြွပ်ဆတ်တဲ့ အသီးအရွက် (ဥပမာ ... ဂေါ်ဖီလိုမျိုး) ၀ါးနေရင် ပိုဆိုးရော။ နားထဲမှာ ကိုယ်ဝါးလို့ ၀ုန်းဒုန်းကြဲပြီးထွက်လာတဲ့ အသံကို သူများပြောတဲ့အသံက လုံးဝ မထိုးဖောက်နိုင်ဘူး ... :)
Very sensitive to sound ဖြစ်တာချင်းတော့ တူတယ်။ ဆင်းရဲဇာတာပါတာလား၊ အရင် ဘ၀ကပဲ အဆ င့်မြင့် သိုင်းဦးသျှောင် ဖြစ်ခဲ့သလား (သို့) သူများ အိပ်နေချိန် တော်တော် နှောက်ယှက်ခဲ့သလား မသိဘူး၊ အခန်းတံခါး ဖွင့်သံ၊ လေတိုက်လို့ ပစ္စည်းတစ်ခုခု ကျသံ ကြားရင်တောင် နိုးတယ်။ ကုလားသေ ကုလားမော အိပ်နေသူတွေ တွေ့ရင် မနာလိုဘူး။ အိပ်ကောင်းခြင်းဆိုတာ ဘာလဲလို့ မေးရမလို ဖြစ်နေတယ်။ အသံကြောင့် နိုးတာက တမျိုး၊ အိပ်တိုင်း အိပ်မက် အမြဲမက်တတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် တစ်ဖုံ။ ရထားပေါ်၊ ကားပေါ် ခဏလေး ငိုက်တာတောင် မက်သေး။ တစ်ခါတစ်လေ လန့်နိုးပြီး ပြန်အိပ်၊ ခုန အိပ်မက်ကို ဆက်မက်နေသေး။ အိပ်မက် မက်နေမှန်း အိပ်ရင်း သိနေတတ်သေးတယ်။
အိပ်မက် မက်နိုင်ဆုံးဆုပေးရင် ပြိုင်ဘက် မရှိ ဗိုလ်ဆွဲနိုင်တယ်။
ကိုပေါနဲ့ မတူတဲ့အချက်က ကျွန်တော်က အကုန်ကြားတယ်။ တခါတလေ သူများ မကြားတာတောင် ကြားတယ်။ ဘာအသံမှန်းတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုပေါပြောတဲ့ လေချွေတာရေးသမားနဲ့ တွေ့ရင် ဒုက္ခရောက်တာချင်းတော့ တူတယ်။ English လို နားထောင်ရင် ပိုဆိုးတယ်။ မြန်မာလိုက သိပ်မကြားရင် ဆက်စပ်တွေးပြီး နားလည်နိုင်ပေမယ့် English လိုကျတော့ မြန်မာလိုလောက် မလွယ်ကူဘူး။ ပြောတဲ့သူ ညံ့တာလည်း ပါမှာပေါ့။ သူများ နားလည်အောင်မှ မပြောနိုင်တာ ... LOL
Ear pieces နဲ့ နားထောင်လေ့ မရှိတော့ အဲ့ဒါကြောင့် နားအူခြင်းနဲ့ အခြား ဒဏ်ရခဲ့ခြင်းမျိုး မရှိဘူး။
သိနားလည်တဲ့သူများရှိရင် ပြောပေးကြပါ။ ကျွန်တော် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။
ကျေးဇူး ကြိုတင်စွာဖြင့် ...
PS: ရှည်သွားတဲ့ comment အတွက် ကြိုတောင်းပန်ပါတယ်။ :)
Do you know what's the meaning of Burma ? Why last time call Burma and now become Myanmar?
When people question me about the meaning of my country,i really have no answer. really shame on that. Frankly speaking , i dont know the answer :(
စည်းမျည်းစည်းကမ်းတွေကို ကြည့်ပြီး မန့်ရမှာတောင် နည်းနည်းလန့်သွားတယ်။ (နည်းနည်းပါ။)
မထူးပါဘူးလေ။ ရှေ့တည့်တည့်ဝေဖန်ရမှာ အားနာသဂျ။ နောက်ကွယ်ကျမှပဲ အတင်းချတော့မယ်။ ကျုပ်က မြန်မာကိုး။ (ဟဲဟဲဟဲ။)
ကြောင်လျှာသီးကို တစ်ပတ်တစ်ခါ သုပ်စားသင့်တယ် ရောဂါမရင့်သေးရင်ပျောက်ကင်းနိုင်တတ်ပါတယ်
အမြဲရောက်ပေမယ့် မမန့် ဖြစ်ခဲ့ တာပါ..
တခါတခါ ကျနော် ကြားတာတွေ မှား.မှား
ကျနော်က နားကြပ်ကို အမြဲတမ်းနီးပါးသုံးတယ်..။
နောက် ..ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင် ၊ သီချင်း၊
နားထောင်ရင် အသံအကျယ်ကြီးနဲ့ မှ အားရတယ်..။ ကာရာအိုကီ ဆိုရင်လဲ ကျယ်မှ.. ဒါပေမယ့် သူများ စကားသံတို့ရုပ်ရှင် ကြည့်ရင် တို့ကာရာအိုကီ ဆိုပြီဆိုရင် ကျနော့် နားထဲမှာ မခံမရပ်ဆူညံနေလို့တောင်းပန်ပြီး အသံလျှော့ခိုင်းရတယ်...။
ကျနော့် နားလဲ ရူးနေပြီထင်ပါတယ်..။
ကျမလဲ ဒီလိုပဲ ကိုပေါရေ...စကားပြောရင်သာ မကြားရတာ အိပ်နေရင်တော့ ချောက်ကနဲ မီးခလုတ်ပိတ်တာက အစကြားကြားပြီး နိူးတတ်တာ...လင့်ခ်ယူသွားမယ်ရှင်..
Moe Htet@William Myint said...
Merry X'Mas to you and your family. This is really good article. I do miss my Dadalot. For all of us Dad is the real hero in life.
By the way May I introduce you myself? I am Moe Htet and I have been in the UK since I was 15. Now I am in Afghan as I joined the Royal Navy asamedical officer. As you know here life is always full of challenges. Anyway most of your posts make me relief of stress and give me kind of good thought.